Inkqubo Ye-Tableware Evulekileyo
Inkqubo Ye-Tableware Evulekileyo Umlinganiswa ophucukileyo we-OSORO kukudibanisa umgangatho we-porcelain ekumgangatho ophezulu kunye nomgangatho wayo oqhelekileyo wombala weendlovu kunye nomsebenzi ofanelekileyo wokugcina ukutya kwifriji okanye efrijini nasekuphekeni kwi-oveni enomphunga okanye kwimicroave. Imilo elula, yemodyuli enezinto zayo ezahlukeneyo ingafakelwa isitaki ukugcina indawo, ngokudibeneyo kwaye ivalwe ngesilaphu esine-O-Seiler okanye O-Connector ukuze ukutya kuhlale kutywinwe kuyo. I-OSORO inokusetyenziswa kwilizwe lonke ukususa isidingo sobomi bethu bemihla ngemihla.
Iifeksi I-Electra ethathwa njengommeli wokusetyenziswa kwedijithali kwicandelo le-armature idibanisa itekhnoloji kunye noyilo lokugxininisa uyilo lobudala bedijithali. Izixhobo ezingenasiphatho ezahlukileyo zitsalela wonke umntu ngenxa yobukrelekrele bayo kunye nembonakalo ebukekayo ikuthathe isigqibo sokuba yahlukile kwindawo emanzi. Amaqhosha abonisa umgca wokuphela kwe-Electra anika abasebenzisi isisombululo esise-ergonomic. "Ingqondo ye-Eco" yeso fait ibonelela abasebenzisi ngokukuko okukhulu ekugcineni. Eli nqaku longeza ixabiso ngakumbi kwizizukulwana ezizayo
Ibhentshi Yesitrato Ibhentshi, eyilelwe ukulandela uyilo lwe-eco-design, ithatha ifenitshala yesitalato ukuya kwinqanaba elitsha. Ngokulinganayo ekhaya ezidolophini okanye kwindalo, imigca yokuphuma kwamanzi yenza iindlela ezahlukeneyo zokuhlala ngaphakathi kwebhentshi. Izixhobo ezisetyenzisiweyo zenziwe ngokutsha ialuminiyam zesiseko kunye neentsimbi zesitulo, ezikhethelwe izinto ezinokuphinda zisebenze kunye nokuhlala; Inomgubo ogqityiweyo oxhathisayo ohambelana nomphumo ofanelekileyo ukuba usetyenziswe ngaphandle kuyo yonke imozulu. Uyilelwe kwisiXeko saseMexico nguDaniel Olvera, uHiroshi Ikenaga, uAlice Pegman noKarime Tosca.
Isikhenkcisi I-Amphora serie yenzelwe ukunxibelelanisa ixesha elidlulileyo nelizayo kwaye inika ithuba lokufumana indlela ezisisiseko nezisebenzayo zamaxesha akudala. Kwakungekho lula njenganamhlanje ukwenza ukuba sifumane umthombo wobomi wamanzi ngeentsuku. Ifom yeFaucet engaqhelekanga ivela kwiinkulungwane ngaphambi kwale mihla, kodwa ikhareji layo lokusindisa amanzi lizisa ingomso. I-faucet retro eyilwe kwimithombo yesitrato yamaxesha akudala kwaye izisa ubuhle kwigumbi lakho lokuhlambela.
Sokuhlambela I-SEREL Wave yokuhlambela ithatha indawo yayo kwigumbi lokuhlambela lanamhlanje ngemigca yegama elichazayo, izisombululo ezisebenzayo kunye nomgangatho onomtsalane. I-SEREL Wave yokuhlambela isitya; Ngelixa itshintsha indlela yokujonga kabini yokuhlambela ngophawu kwisitya sayo esahlukileyo, ikwabandakanya ukusetyenziswa kwabantu abadala kunye nomntwana kunye nefomu yakhe yobuhle. Ukongeza ekusetyenzisweni njengesitya sabantwana, ibonelela ngomsebenzi wokucoca nokuhlamba izihlangu osetyenziswa kwinkcubeko yamaSilamsi. Indlela ethe gabalala yokuyila kwebhafu kukuhlambela ubutsha kunye nokusebenza kwayo. Le ndlela ichaphazela uyilo kubaluleke kakhulu.
LOTUS Iseti Yokuhlambela Saturday 25 September
Electra Iifeksi Friday 24 September
Osoro Inkqubo Ye-Tableware Evulekileyo Thursday 23 September
Inkqubo Ye-Tableware Evulekileyo Iifeksi Iifeksi Ibhentshi Yesitrato Isikhenkcisi Sokuhlambela